Antisocial Personality Disorder (လူမှုဆက်ဆံရေးညံ့ဖျင်း၍ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ချို့ယွင်းခြင်း) - Hello Sayarwon
Antisocial Personality Disorder (လူမှုဆက်ဆံရေးညံ့ဖျင်း၍ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ချို့ယွင်းခြင်း)
Antisocial Personality Disorder (လူမှုဆက်ဆံရေးညံ့ဖျင်း၍ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ချို့ယွင်းခြင်း) ကဘာလဲ။
တခါတရံမှာ လူမှုရောဂါလို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေတခုဖြစ်ပြီး မှန်တယ်မှားတယ်ကို ဂရုမစိုက်တတ်တဲ့၊ တခြားသူတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်နဲ့ ခံစားချက်တွေကို လစ်လျူရှုထားတတ်ပါတယ်။ ဒီပြသနာရှိသူတွေဟာ သူတပါးကို ဆန့်ကျင်ပြီး ကန့်လန့်တိုက်လိုကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အပြုအမူအတွက်လည်း နောင်တမရသလို အပြစ်ရှိတယ်လို့လည်း မခံစားတတ်ကြပါဘူး။
သူတို့ဟာ ဥပဒေကိုလည်း ချိုးဖောက်လွယ်ပြီး ရာဇဝတ်သားတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လိမ်ညာတတ်ပြီး ကြမ်းတမ်းစွာ ပြုမူဆက်ဆံတတ်ကြပါတယ်။ အရက်၊ ဆေး စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြသနာတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီအမူအကျင့်တွေကြောင့် သူတို့ဟာ မိသားစု၊ လုပ်ငန်းခွင်၊ ကျောင်း စတာတွေမှာ လုပ်ငန်းတာဝန်ကို မယူနိုင်ကြပါဘူး။
Antisocial Personality Disorder (လူမှုဆက်ဆံရေးညံ့ဖျင်း၍ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ချို့ယွင်းခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အမျိုးသားတွေမှာ ပိုတွေ့ရပါတယ်။ အမျိုးသားတွေရဲ့ ၃%၊ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ၁%မှာ ဒီပြသနာရှိတတ်ပါတယ်။
Antisocial Personality Disorder (လူမှုဆက်ဆံရေးညံ့ဖျင်း၍ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ချို့ယွင်းခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
တွေ့ရများတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြဖြစ်ပါတယ်။
အမြဲလိမ်ညာပြီး သူတပါးအပေါ် မရိုးသားခြင်း
သူတပါးကို ဂရုမထား မထီမဲ့မြင် ပြုတတ်ခြင်း
သူတပါးအပေါ် မိမိအကျိုးအတွက်ဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ပျော်ဖို့ဖြစ်ဖြစ် အနိုင်ကျင့်စနောက်သည်ကို အရသာခံခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်လုပ်ခြင်း
သူတပါး၏ ရပိုင်ခွင့်များကို အမြဲကျူးလွန်ခြင်း
စော်ကားတတ်ခြင်း၊ စိတ်ဆတ်ခြင်း၊ စိတ်တိုလွယ်ခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းခြင်း
သူတပါးအပေါ် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိခြင်း၊ သူတပါးကို ထိခိုက်စေခြင်းအတွက် နောင်တမရခြင်း
မလိုအပ်ဘဲ အန္တရာယ်များသော အမူအကျင့်များကို ပြုမူတတ်ခြင်း
အပြုအမူများ၏ နောက်ဆက်တွဲပြသနာများကို မသိခြင်း၊ သူတပါးထံမှ သင်ခန်းစာ မယူတတ်ခြင်း
တာဝန်ကို ငြင်းပယ်ခြင်း၊ ရှောင်ရှားလိုခြင်း
ဒီပြသနာရှိတဲ့ အရွယ်ရောက်သူများဟာ အသက် ၁၅နှစ်မတိုင်မီ လက္ခဏာတွေ ပြတတ်ပါတယ်။ လက္ခဏာတွေဟာ ပြင်းထန်ပြီး ထပ်တလဲလဲပြုတတ်ပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လူများ၊ တိရစ္ဆာန်များအပေါ် ကြမ်းတမ်းခြင်း
ဥပဒေကို ဆိုးရွားစွာ ချိုးဖောက်ခြင်း
ဒီပြသနာဟာ တသက်လုံးဖြစ်တတ်ပေမယ့် လူတချို့ရဲ့ ဖျက်ဆီးကျူးလွန်တတ်တဲ့ အမူအကျင့်များဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ လျော့နည်းသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက်ကြီးလာလို့ လျော့နည်းသွားသလား၊ အကျိုးဆက်တွေကို နားလည်လာခြင်းလားဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး။
သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေများထဲမှာ ဒီပြသနာရှိနေတယ်လို့ ယူဆရင် သူတို့ကို ဆေးကုသမှုခံယူဖို့၊ အထွေထွေကု ဆရာဝန်ဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ကျန်းမာရေးပါရဂူဖြစ်ဖြစ် ပြသဖို့ တိုက်တွန်းပါ။
Antisocial Personality Disorder (လူမှုဆက်ဆံရေးညံ့ဖျင်း၍ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ချို့ယွင်းခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အကြောင်းအရင်းကိုတော့ မသိရပါဘူး။ လူတယောက်ရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ တခြားအကြောင်းအရာ ဥပမာ ကလေးဘဝက အနိုင်ကျင့်ခံရမှုဟာ ဒီပြသနာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
လူမှုရေးညံ့ဖျင်းတဲ့၊ အရက်စွဲတဲ့မိဘတွေဟာ ဖြစ်နိုင်ခြေ များစေပါတယ်။ အမျိုးသားတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ထောင်သားတွေမှာလည်း တွေ့ရများပါတယ်။
ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက တိရစ္ဆာန်တွေကို မီးရှို့ခြင်း၊ ရက်စက်စွာ ပြုမူခြင်းစတာတွေဟာ ဒီပြသနာကို ကြီးထွားလာစေတတ်ပါတယ်။
တချို့ဆရာဝန်တွေကတော့ စိတ်ဝေဒနာရှင်တွေနဲ့ ပြသနာတူတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဝေဒနာသည်တွေက ပိုပြီး ဆိုးရွားစွာ ခံစားရပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Antisocial Personality Disorder (လူမှုဆက်ဆံရေးညံ့ဖျင်း၍ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ချို့ယွင်းခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ကလေးဘဝကတည်းက ပြသနာရှိကြောင်း သိရခြင်း
အခြား ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ပြသနာ အပါအဝင် မိသားစု ရာဇဝင်ရှိခြင်း
ကလေးဘဝတွင် အနိုင်ကျင့်ခံ၊ လစ်လျူရှုခံရခြင်း
ကလေးဘဝတွင် မတည်ငြိမ်သော၊ ကြမ်းတမ်းသော၊ ပရမ်းပတာနိုင်သော မိသားစုတွင် နေထိုင်ခဲ့ရခြင်း
Antisocial Personality Disorder (လူမှုဆက်ဆံရေးညံ့ဖျင်း၍ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ချို့ယွင်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်းတွေကနေ ရောဂါရှာဖွေမှု ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ လူနာရဲ့ လက္ခဏာဟာ ဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲ၊ ဘယ်လောက်ဆိုးလဲ ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီရောဂါလို့ အမည်တပ်နိုင်ဖို့ လူနာဟာ ကလေးဘဝကတည်းက စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ၊ အမူအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြသနာတွေ ရှိခဲ့ရပါမယ်။
Antisocial Personality Disorder (လူမှုဆက်ဆံရေးညံ့ဖျင်း၍ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ချို့ယွင်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသရခက်ပေမယ့် တချို့လူနာတွေကို အချိန်ကြာကြာ အနီးကပ် စောင့်ကြည့်ကုသရင် အကျိုးရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဆေးပညာဆိုင်ရာ၊ စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ကုသသူတွေကို ရှာဖွေပါ။
ကုသမှုဟာ တဦးချင်းစီရဲ့ အခြေအနေ၊ စိတ်ပါဝင်စားမှု၊ ရောဂါလက္ခဏာရဲ့ ဆိုးရွားမှု စတာတွေပေါ်လည်း မူတည်ပါတယ်။
စကားပြောကုထုံးလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ဒေါသနဲ့အကြမ်းဖက်မှု ကုသခြင်း၊ ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု ကုသခြင်း၊ တခြား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေကို ကုသခြင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းဟာ အမြဲတမ်းတော့ မထိရောက်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ဝေဒနာဟာ ပြင်းထန်နေပြီး ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်က ဒီပြသနာရှိတယ်လို့ ဝန်မခံရင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရောဂါအတွက် အစားအစာနှင့် ဆေးဝါးအဖွဲ့ကြီးကနေ လက်ခံထားတဲ့ ဆေးဝါးရယ်လို့တော့ မရှိပါဘူး။ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီးတော့ပဲ ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ စိတ်ပူပန်ခြင်း၊ စိတ်ကျခြင်း၊ ဒေါသထွက်ခြင်း စတာတွေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးတချို့ဟာ အလွဲသုံးနိုင်ခြေ ရှိတဲ့အတွက် သတိထားပြီး ပေးရပါမယ်။
ဘယ်လို နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက လူမှုဆက်ဆံရေးညံ့ဖျင်း၍ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ချို့ယွင်းခြင်းအတွက် အထောက်အကူ ပြုသလဲ
ဒီပြသနာရှိသူတွေဟာ သူတပါးအပေါ် ဆိုးဆိုးရွားရွား ဆက်ဆံတတ်ပြီး နောင်တရခြင်းလည်း မရှိပါဘူး။ သူတို့လိုလူမျိုးတွေ ပတ်ဝတ်းကျင်မှာရှိရင် သင်ကိုယ်တိုင်ဟာ မိမိဖာသာ အဆင်ပြေအောင် ကြိုးစားဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေဟာ ဒီလိုလူတွေနဲ့ ဘယ်လိုဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာ၊ ဒေါသနဲ့ အကြမ်းဖက်ခြင်းတွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာ ပြောပြနိုင်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စမှာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်ကို ရှာဖွေပါ။ မိမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူမှာ ဒီပြသနာရှိရင် ဆရာဝန်ပြသနိုင်အောင် ကူညီပါ။ င်္ဒပြသနာနဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ အကူအညီပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်း၊ မိသားစု၊ မိတ်တွေတွေဆီကနေ အကြံဉာဏ်ယူပါ။
(Learn about Antisocial Personality Disorder. What are the symptoms, the causes and how to treat this condition? What can we do to cope and prevent its symptoms?)